Wararka Maanta: Axad, Nov 15, 2020-Arday Kenyan ah oo soo saaray hub cusub oo lagu qalabayndoono ciidamada Kenya
Ardaydan oo ku jira da'da 20-meeyada waxaa la soo xiriiray Adeegga Sirdoonka Qaranka sida uu shaaca ka qaaday Afhayeenka Dowladda Col (Rtd) Cyrus Oguna.
Ardaydan dhalinyarada ah ayaa lagu amaanay sameynta hub magaciisa lagu sheegay CMZ 4 Assault Rifle, oo ah aalad yareyneysa saameynta waxyaabaha qarxa ee la farsameeyay iyo hubka kale ee wax dila.
Bishii hore, Madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa booqday akadeemiyada lagu sameynayay hubkaan, isagoo ammaanay waxqabadka ardayda fulinaysa mashruucaan.
Kenya ayaa sheegtay inay hubkaan ugu talo gashay Ciidamada Difaaca Kenya si ay u yareyso ku tiirsanaanta hubka shisheeye.
Qeyb kamid ah hubkaan ayaa la sheegay in ay dowladda Kenya u adeegsandoonto ka hortaga kooxda Al-Shabaab.